Shabaab oo Dib u Qabsatay Marka
Qaar ka tirsan maleeshiyada Al-shabaab
Wararka ka imaanaya magaalada Marka ee xarrunta gobolka Shabeellaha Hoose, ayaa sheegaya in maleeshiyaadka al-Shabaab ay dib u qabsadeen magaalada Marka duhurkii maanta.
Dagaal muddo kooban socday ayuu duleedka magaalada ku dhex maray ciidamo dowladda Soomaaliya ka tirsan iyo kooxda al-Shabaab. Illaa iyo hadda lama yaqaan qasaaraha rasmiga ah ee dagaalkaasi uu dhaliyay.
Arrintani, ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ay saaka magaalada ka saareen kooxdii al-Shabaab oo habeen hore dagaal la'aan ku gashay magaalada, markii ay isaga baxeen magaaladaasi ciidamadii AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya.
Goob joogayaal ayaa VOA u sheegay in dagaal muddo kooban uu dhex maray mar kale al-Shabaab iyo ciidamadii dowladda ee magaalada saaka galay, kuwaas oo markii dambe magaalada ka baxay.
Hadda, waxa magaalada ku sugan kooxda al-Shabaab, siday dadku sheegayaan.
Dagaalladan dhacayay, ayaa la sheegay in aan haba yaraatee ku lug laheyn ciidamada AMISOM, waxana wararka aynu heleyno ay sheegayaan in ay ciidamada AMISOM ee Marka ka baxay habeen hore ay degeen xerrada Ayuub oo duleedka magaalada Marko ah.